किन दुख्छ ढाड ? यस्ता छन् यसबाट बच्ने उपायहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
किन दुख्छ ढाड ? यस्ता छन् यसबाट बच्ने उपायहरु
ढाड दुख्ने समस्या युवा देखि वृद्ध समेतलाई हुने गर्छ। कामको प्रकार, जीवनशैली, खानपिन आदिको कारणले ढाड सम्बन्धि समस्या आउने गर्छ ।
बाल्या तथा किशोरावस्थामा शरीर लचिलो हुन्छ । त्यसैले उनीहरूमा ढाड दुख्ने समस्या वयष्कको तुलनामा विरलै हुने गर्छ ।
तथापि गर्‍हौँ व्याग उठाउने, गलत तरिकाले सुत्ने, खेल्दा उफ्रँदा चोट लाग्नेजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा पनि बालबालिकालाई ढाड दुख्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
मानसिक तनाव, डिप्रेसन वा बेचैनी, गर्भावस्था, लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर गर्ने काम, धूम्रपान, मदिरापान, समयमा नसुत्नु, मोटोपना, अत्यधिक शारीरिक श्रम
यी कारणहरूले ढाड दुखेमा विभिन्न उपाय अपनाएर पनि ढाड दुख्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । ढाडको दुखाईलाई समयमै घरेलु उपचारको प्रयोग गरेमा पनि निको हुन सक्छ ।